Забур 77 CARS - Nnwom 77 ASCB
1Mesu mefrɛɛ Onyankopɔn srɛɛ mmoa;
mesu mefrɛɛ no sɛ ɔntie me.
2Ɛberɛ a mewɔ ahohiahia mu no, mehwehwɛɛ Awurade;
metrɛɛ me nsa a ɛmpa aba mu anadwo
na me kra ampene sɛ wɔbɛkyekye ne werɛ.
3Ao Onyankopɔn mekaee wo, na mesii apinie;
medwendweneeɛ, na me honhom tɔɔ piti.
4Woamma mʼani ankum;
amanehunu dodoɔ enti, mantumi ankasa.
5Medwenee nna a atwam no ho,
teteete mfeɛ no ho;
6mekaee me nnwom a na meto no anadwo.
Mʼakoma dwenee ho na me honhom bisaa sɛ:
7“Enti, Awurade bɛpo yɛn daa?
Ɔrenhunu yɛn mmɔbɔ bio anaa?
8Nʼadɔeɛ a ɛnsa da atu ayera koraa anaa?
Na ne bɔhyɛ no, amma mu koraa anaa?
9Onyankopɔn werɛ afiri sɛ ɔbɛyɛ mmɔborɔhunufoɔ anaa?
Abufuo enti ne yam nhyehye no bio anaa?”
10Afei, medwenee sɛ, “Onyankopɔn Ɔsorosoroni,
deɛ ɛhyɛ me kra so ne sɛ, wommfa wo tete nsa nifa no mmoa yɛn bio.”
11Mɛkae nneɛma a Awurade ayɛ;
aane, mɛkae wʼanwanwadeɛ a woyɛɛ tete no.
12Mɛdwene wo nnwuma nyinaa ho
na masusu wo nneyɛɛ akɛseɛ nyinaa ho.
13Ao Onyankopɔn, wʼakwan yɛ kronn.
Onyame bɛn na ɔso sɛ yɛn Onyankopɔn?
14Wone Onyankopɔn a woyɛ anwanwadeɛ;
wokyerɛ wo tumi wɔ aman mu.
15Wode wo tumi nsa no gyee wo nkurɔfoɔ,
Yakob ne Yosef asefoɔ no.
16Ao Onyankopɔn, nsuo no hunuu wo,
nsuo no hunuu wo na wɔpopoeɛ;
ebunu no mpo ho wosoeɛ.
17Omununkum tɔɔ nsuo,
aprannaa gyegyee wɔ soro;
na wo bɛmma twaa ogya dii akɔneaba.
18Wʼaprannaa boboom wɔ twahoframa no mu,
wʼanyinam hyerɛn ewiase;
asase popoeɛ na ɛwosoeɛ.
19Wode wo kwan faa ɛpo mu,
wode faa nsuo kɛseɛ mu,
nanso wɔanhunu wʼanammɔn.
20Wonam Mose ne Aaron so
dii wo nkurɔfoɔ anim sɛ nnwankuo.
ASCB : Nnwom 77